Ipropathi yoYilo olukhulu "Eco Bush Retreat"
Indlu yodaka sinombuki zindwendwe onguMaggie
"I-Callignee Eco Bushhouse" yindawo ephawulekayo, ezinzileyo, eyi-100% kwigridi yendlu ebekwe phakathi kweehektare ezi-5 zehlathi elikummandla ozukileyo waseGippsland.
Le ndawo iyilwe ngoYilo, iphumelele ibhaso lokubuyela ematyholweni yayilikhaya lokuqala eliboniswe kwiGrand Designs Australia.
Yonwabela impelaveki entle neqabane lakho okanye abahlobo bakho kwaye ulahleke phakathi kweehektare ezi-5 zehlathi labucala. Yonwabela ukubhak echibini emini kwaye wonwabele iglasi yewayini kwindawo entle yomlilo iza ngokuhlwa.
I-Callignee 2 isebenza kwimigaqo yokuphila eco-friendly kwaye iphuma kwi-100% kwigridi. Intsingiselo: (kungekhona kwigridi yombane) kwaye ke ngoko iyazingca ngokusebenza kwayo amandla, uzinzo kunye nokuzimela ngokupheleleyo.
Ukuqonda ukuhlala kwikhaya "ngaphandle kwegridi".
UCallignee ngumsebenzi wobugcisa ozinzileyo. Siyazingca ngokuzimela ngokupheleleyo, oku kuthetha ukuba sixhomekeke kwi-100% elangeni ukunika amandla ikhaya lethu.
Sinemeko yogcino lwebhetri ye-lithium nto leyo ethetha ukuba phantse unyaka wonke sihlala elangeni. Nangona kunjalo; ngamaxesha apho kungekho langa, kufuneka siqhube ijenereyitha yethu. Sinesixhobo esitsha sokuqalisa i-generator esibeka amandla kwakhona kwiibhetri ze-lithium ezivumela ukusetyenziswa okuqhelekileyo kwamandla ekhaya. Isikhokelo somsebenzisi siya kubandakanywa netshekhi yakho kwiinkcukacha ukuba iibhetri ziphantsi ngexesha lokuhlala kwakho. Kulula kakhulu. Nceda uqwalasele konke oku ngaphambi kokuba wenze ubhukisho lwakho, siyithanda ngokupheleleyo indlela le ndlu esebenza ngayo, ibandakanya intuthuzelo kunye nozinzo.
Amanzi emvula avunwa kwindawo kunye nenkunkuma evela kwikhaya eliqhekezwe ngenkqubo yeBiolytic Blackwater etshonelwe emhlabeni.
ICallignee yenzelwe ukuba igumbi ngalinye lonwabele ilanga laseMantla. Ikhitshi, intliziyo yeli khaya ivuleleka eMntla idibanisa ngqo ichibi kunye neegadi. Ukunika iindwendwe ukhetho lokubonelelwa ngaphandle ngasechibini ngokudlula kwibhentshi yesiqithi sekonkile okanye ngaphakathi kwitafile yokutyela eyodwa ejonge kuMazantsi ejonge ematyholweni.
Indawo yeplani evulekileyo yabelana ngeziko elinamacala amabini kunye nebhatyi yamanzi eqinisekisa ukuba onke amandla ayo asetyenziswa.
Ikhaya lulwakhiwo olunamanqanaba amaninzi kunye negumbi lokulala eliphambili kumgangatho osezantsi obonisa ibhedi yenkosi, ekhokelela kwi-ensuite yobugcisa bobugcisa eneglasi evulekileyo yeshawari ephindwe kabini enganikezeli zimfihlo-kodwa iyakumema ukuba ube yinto enye kunye nokungqongileyo.
Inqanaba le-mezzanine lihlala ibhedi yesibini yeendwendwe kunye negumbi lokufunda. Yindawo ekhangayo ethatha ithuba lokujonga okumangalisayo ukuya kwindawo entle yehlathi.
Ukufiphalisa ukwahlula kokuhlala ngaphakathi nangaphandle kunye neengcango eziphindwe kabini, indawo yokuhlala yangaphakathi iyinto encinci kwaye yangoku nje ngaphandle.
Iindonga kunye neesilingi yiCorten rust sheet kunye nepeyinti yomhlwa. Imigca icocekile kwaye iyinyani kwizinto eziyenzayo. Amaplanga asetyenzisiweyo asuka kwiPrincess Pier yaseMelbourne enza isilingi yegumbi lokulala, igumbi lokuhlambela elingamampunge, itafile yokutyela kunye nomgangatho othile.
Ikhitshi elikwindawo esembindini enezixhobo zamandla ezi-5 zeenkwenkwezi zinebhentshi yesiqithi eyenziwe ngekhonkrithi kunye nentsimbi kunye nefestile ethambekileyo ejonge indawo yedama.
Idama elinomphetho weemitha ezilishumi elinambini linokujongwa ngefestile enkulu yegumbi lokuphumla ekwayinxalenye yodonga lwamachibi kwaye iphinda-phindeke kabini njengophawu lwamanzi apholileyo. (Nceda uqaphele idama kunye nechibi lokuhlala (hayi i-spa) AKUKHO kufudumala).
Ikhaya lijikelezwe zizandla ezikhethiweyo, amatye egranite abekwe ngokucwangcisiweyo, kukho ichibi elinokufikelela kwilitye lokuya ekhaya kwaye ngaphezulu kukho ibhulorho enqunyanyisiweyo enokufikelela kwinqanaba eliphezulu.
Indawo yethu efihlakeleyo ye-eco retreat ifumaneka nje iiyure ezi-2 ukusuka eMelbourne CBD.
Kwimizuzu eli-15 ungafikelela kweyona dolophu ikufutshane ebizwa ngokuba yiTraralgon. Apha uya kufumana eyona ikofu ilungileyo kulo mmandla kubandakanya iSt Ali espresso, 5 izivamvo, iPadre kunye nezinye ezininzi.
I-Traralgon iye yaba yimbiza yokunyibilika kulonwabo lokupheka kunye neminye yemimandla yonke abapheki ababalaseleyo kunye neeresityu eziphumayo.
Ekuhlaleni siphangiwe ukuba sikhethe kunye neendawo ezininzi zewayini kumnyango wethu (URL FIDDEN) Chitha impelaveki uhlola kwaye ungcamle eyona ndawo intle yalapha.
Inkampani yewayini yeTraralgon kwaye uluhlu luyaqhubeka.
Ungalibali ukwenza ixesha lokujonga iTarra Bulga National Park entle - imizuzu engama-20 ukusuka eCallignee II.
Ipaki yeSizwe yaseTarra Bulga idume ngeentlambo zayo ezichumileyo, imithi emikhulu yothuthu lwentaba kunye neeferns zemithi. I-Tarra Bulga National Park yenye yeendawo ezine eziphambili zehlathi elipholileyo elipholileyo kwilizwe.
Pakisha iPiknikhi phantsi kothuthu lwentaba!!
Yiba nesidlo sasemini kwindawo yePikiniki yaseTarra Bulga, ngaphandle nje kweNdlela yeGrand Ridge, okanye kwindawo yepikiniki yaseTarra Valley ngaphandle kweTarra Valley Road. Omabini amachokoza abekwe phakathi kothuthu olukhulu lwentaba kunye namagqabi anomthunzi weeferns zemithi kwaye abonelela ngeetafile, iindawo zokubasa, izindlu zangasese kunye neendawo zokuhlala zepikiniki.
Iindlela zaseBushwalks, iingxangxasi kunye nemilambo
Zama enye yeendlela ezininzi zokuhamba eziphuma kwiindawo zepikiniki. Meander ehlathini, jonga emazantsi ukuya eTarra Falls, okanye uthathe iFern Gully Nature Walk, ebandakanya iimbono ezintle ecaleni kwebhulorho emisiweyo edumileyo.
Amahlathi anemvula yindawo ekhuselekileyo yezityalo nezilwanyana zasendle. Fumana iindidi ngeendidi zeentaka ezibandakanya i-pilotbird, i-cockatoo enomsila omthubi, i-whipbird yasempuma, kunye ne-currawongs. Ndwendwela ngokuhlwa xa ihlathi liphila njengoko iipossums, izikhova kunye namalulwane ephuma ukuze azondle. Ukuba unethamsanqa, unokubona inyoni yelyrebird ikrwela phantsi ihlathi ifuna ukutya okanye ikrobe kwabanye abemi abanje ngeewombats, i-wallabies emgxobhozweni, iigliders kunye neeplatypus.
IPasika------------ 3 Ubuncinci bokubhukisha ngobusuku
Iimpelaveki ezinde kunye neempelaveki zoMnyhadala - Ubuncinci bokubhukisha ubusuku obu-3
Impelaveki yeNdebe yaseMelbourne - Ubuncinci bokuBhukisha ubusuku obu-3
Iindwendwe ziya kuba ne-100% yodwa yepropathi iphela ngexesha lokuhlala.
Ndiza kuqhagamshelana neendwendwe kwiintsuku ze-2 ngaphambi kokufika kwakho, uya kufumana isheke esibanzi kwisikhokelo esinalo lonke ulwazi ukwenza ukuhlala kwakho eCallignee kungakholeleki.
Iindwendwe zingaqhagamshelana nabanini nanini na njengoko zihlala kufutshane.
Ndiza kuqhagamshelana neendwendwe kwiintsuku ze-2 ngaphambi kokufika kwakho, uya kufumana isheke…